Saron’ny polisy avy ao amin’ny boriborintany voalohany ao Analakely, ny faran’ny herinandro teo ireo vehivavy roa (bevohoka) tompon’antoka amin’ny fanendahana eny Analakely sy ny manodidina. Notatahin’izy roa vavy ireo ny poketran’ny renim-pianakaviana roa samy hafa ka lasa ny vola. Efa nigadra enim-bolana teny Antanimora ireto roa vavy manataka poketra ireto.
Olona iray naratra vokatry ny lozam-piarakodia tao Ambohidehilahy, Ambodizozoro Ambohimalaza, ny faran’ny herinandro teo. Fiara iray no niala kamiao rehefa nifanena tao anaty fiolahana ka nandona takela-dokam-barotra iray. Nentina haingana tao amin’ny CSB II Ambohimangakely ilay naratra.
Olona miisa 14 koa indray naratra nandritra ny lozam-piarakodia tao Beheloke Anakao Toliara, ny faran’ny herinandro teo ihany. Fiara kamiao nitondra olona miisa 15 no nifandona tamin’ny kamiao iray hafa an’ny orinasa iray ao Toliara nitondra olona miisa 14. Tsy fitandremana teo amin’ny mpamily ny nahatonga ny loza. Nalefa ao amin’ny hopitaly ao Toliara ireo naratra.